Kismaayo News » Farmaajo oo faraskii Xiin-Finiin ku furay Hobyo
Farmaajo oo faraskii Xiin-Finiin ku furay Hobyo
Kn: Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa socdaalkii gobollada ee Nabad iyo Caano ku furay magaalo xeebeedka qadiimiga ah ee Hobyo.
Madaxweynaha ayaa Guriceel kadib xagta soo mariyay magaalada Balanballe oo kamid ahayd magaalooyinka soohdinta dhaca ee Itoobiyaanku qabsadeen horaantii sideetamaadkii kabacdina ka caano dhamay magaalada Caabudwaaq ee suugaanta Soomaalida horay luugu yiri “geel soo dardhaday Caabudwaaq weelka ii dara dheh”.
Magaalada Cadaado oo ka carootay heshiiskii lagu dhameeyay khilaafkii Galmudug ayuu ku hakaday waxaana halkaasi mar kale lagu dhameeyay cabashadii Cadaado ayadoo la isla qaatay in maamulka Galmudug uu qayb ahaa ku shaqeeyo Cadaado, qaybna loo raro oo loo wareejiyo Dhuusamareeb. Waxay u muuqataa in hadeer reer Galmudug isla jaanqaadi doonaan mar hadii la dhameeyay khilaafaadkii siyaasiga ahaa.
Madaxweynaha inta uu socdaalka ku jiray ayuu dhagax dhigay daahfurka mashruucyo bulshada waxtar u leh, waxaana ugu muhiimsanaa Jaamacadda Umadda oo farac looga dhisayo Caabudwaaq, jidka isku xira Gaalkacyo iyo Hobyo iyo waliba dekedda ay yeelan doonto Hobyo.
Safarka madaxweynaha ayaa la sheegayaa inuu kusoo xirayo tagitaankiisa magaalada Hobyo, kadibna uu ku noqon doono caasimadda Muqdisho taasi oo ka dhigan in Faraskii Xiin-Finiin uu heensaha iyo kooraha uga furay Hobyo.
Farmaajo oo socdaalkiisa ka bilaabay magaalada Garoowe todobadii bishan Janaayo ayaa jaray masaafo dhulka ah oo ka badan 1260km taasi oo hadii wadooyin laami ah uu dalku lahaan lahaa ay ku qaadan lahayd 18 saac iyo bar oo kaliya halka ay todobaadyo ku qaadaatay inuu isu maro magaalooyinka uu cagta mariyay. Jidka dheer ee Farmaajo maray oo ahaa mid aad u burbursan oo ka dhac ka deg ah ayaa ahaa mid daal iyo kalyo xanuun badan laga qaadayo laakiin hadii laga faa’iidaysto dawladnimada isla mar ahaantaana jidkaasi dheer loo badalo mid laami ah waxay qofka Boosaaso jooga ku qaadan lahayd inuu Muqdisho baabuur ku yimaado 20 saac iyo 44 daqiiqo. Marka laga qiyaas qaato masaafaha jidkii hore ee laamiga ahaa ee Muqdisho ku xiri jiray gobollada dhexe iyo kuwa waqooyi, magaalada Boosaaso waxay Muqdisho u jirtaa 1395km.
Waxaan rajaynaynaa in socdaalka uu madaxweynuhu ku bixiyay deegaamada Puntland iyo Galmudug uu ka kororsado khibrad iyo ku dhiiranaan ilaalinta madaxbanaanida dalka, horumarinta kaabayaasha bulshada halbowlaha u ah sida jidadka, caafimaadka, waxbarashada, helista biyo nadiif ah iyo sugista amaanka dadka iyo dalka, bad iyo bariba taasi oo lagu heli karo oo kaliya dhisidda ciidamo qaran oo xoog leh. Xaqiiqda dhabta ayaa ah in Soomaaliya aysan ciidan la’aan haynin ee waxaa haysa qorshe xumo baahsan. Ciidamada gobollada iyo kuwa Caasimadda jooga ee Soomaalida ah waxay kor u dhaafayaan boqol kun oo hubkooda iyo dirayskoodu u dhanyahay kaliya waxay u baahanyihiin dawlad isku dubaridda, ciidamada isku dhafta, mushaar iyo gunooyin joogta ahna siisa.
Madaxweynaha oo dib ugu noqon doona Villa Somalia oo runtii la dhihi karo waa xabsi dhakada ka banana, maadaama madaxweynuhu uu inta badan ayada dhex fadhiyo marka uu baxayana baabuur qafilan ku aado garoonka Aadan Cadde oo masaaafo hal kiiloomitir ah u jira, ayaa markani laga sugayaa afkaar horusocod oo kuwii hore ee dawladdiisu ku shaqaynaysay kaduwan, maadaama uu indhihiisa ku soo arkay dhul kun kiiloomitir ka badan oo nabad ah, shacabka ku noolna ay diyaar u yihiin dowladnimo iyo cid ku hogaamisa tubta toosan.